Nhau - Makambani ekuItaly ezvipfeko zvekugadzira anoshandisa tekinoroji yeRFID kuti ikurumidze kugovera
Makambani ekugadzira zvipfeko zveItaly anoshandisa tekinoroji yeRFID kuti ikurumidze kugovera
LTC ikambani yekuItaly yechitatu-bato rekugadzira zvinhu iyo inonyanya kuzadzisa maodha emakambani embatya.Iyo kambani ikozvino inoshandisa RFID yekuverenga nzvimbo panzvimbo yayo yekuchengetera uye yekuzadzikisa nzvimbo muFlorence kuronda zvakanyorwa zvakanyorwa kubva kune akawanda vagadziri vanobatwa nepakati.
Hurongwa hwekuverenga hwakaiswa mukupera kwaMbudzi 2009. Meredith Lamborn, nhengo yeboka rekuongorora chirongwa cheLTC RFID, akataura kuti nekuda kwehurongwa uhu, vatengi vaviri vakwanisa kukurumidza kugovera zvigadzirwa.
LTC, inozadzisa maodha emamiriyoni gumi ezvinhu pagore, inotarisira kugadzirisa mazana mana ezviuru zveRFID-zvigadzirwa muna 2010 zveRoyal Trading srl (iyo ine shangu dzevarume nevakadzi dzepamusoro pasi peiyo Serafini brand) neSan Giuliano Ferragamo.Makambani ese ari maviri emuItaly anonyudza ma tag eEPC Gen 2 RFID mune zvigadzirwa zvavo, kana kuisa ma tag eRFID kune zvigadzirwa panguva yekugadzira.
Kubva muna 2007, LTC yanga ichifunga nezve mashandisirwo eiyi tekinoroji, uye mutengi wayo Royal Trading yakakurudzirawo LTC kuvaka yayo RFID muverengi system.Panguva iyoyo, Royal Trading yaive ichigadzira sisitimu yaishandisa RFID tekinoroji kuteedzera kuwanikwa kweSerafini merchandise muzvitoro.Kambani yeshangu inotarisira kushandisa RFID yekuzivikanwa tekinoroji kuti inzwisise zvirinani chitoro chega chega, uku ichidzivirira yakarasika uye yakabiwa.
LTC's IT department yakashandisa Impinj Speedway vaverengi kuvaka portal muverengi ane 8 antenna uye chiteshi muverengi ane 4 antenna.Vaverengi vemugwagwa vakakomberedzwa nemafenzi esimbi ayo, Lamborn anoti, anotaridzika kunge bhokisi rekutakura zvinhu, iro rinova nechokwadi chekuti vaverengi vanongoverenga ma tag anopfuura, pane maRFID tag ari padhuze nezvimwe zvipfeko.Munguva yekuyedza, vashandi vakagadzirisa antenna yemuverengi wechiteshi kuti averenge zvinhu zvakarongedzerwa pamwechete, uye LTC yakawana mwero wekuverenga we99.5% kusvika parizvino.
"Maverengero chaiwo ekuverenga akakosha," Lamborn akadaro."Nekuda kwekuti isu tinofanirwa kutsiva chigadzirwa chakarasika, sisitimu iyi inofanirwa kusvika pa100 muzana yekuverenga mitengo."
Kana zvigadzirwa zvatumirwa kubva kunzvimbo yekugadzira kuenda kudura reLTC, izvo zvigadzirwa zveRFID-tagged zvinotumirwa kune yakatarwa yekurodha, uko vashandi vanofambisa mapallets kuburikidza negedhi vaverengi.Zvigadzirwa zvisina kunyorwa-RFID zvinotumirwa kune dzimwe nzvimbo dzekuburitsa, uko vashandi vanoshandisa mabar scanner kuverenga mabhakodhi echigadzirwa.
Kana iyo EPC Gen 2 tag yechigadzirwa ikaverengwa zvinobudirira nemuverengi wegedhi, chigadzirwa chinotumirwa kunzvimbo yakatarwa mudura.LTC inotumira risiti yemagetsi kumugadziri uye inochengeta SKU kodhi yechigadzirwa (yakanyorwa paRFID tag) mudura rayo.
Kana odha yezvigadzirwa zvakanyorwa neRFID ikagamuchirwa, LTC inoisa zvigadzirwa zvakanaka mumabhokisi zvichienderana nekurongeka uye nekuzvitumira kune vaverengi ve nzira iri pedyo nenzvimbo yekutumira.Nekuverenga tag yechigadzirwa chimwe nechimwe cheRFID, sisitimu inozivisa zvigadzirwa, inosimbisa kurongeka kwazvo, uye inodhinda rondedzero yekuisa mubhokisi.Iyo LTC Ruzivo System inogadziridza chimiro chechigadzirwa kuratidza kuti zvigadzirwa izvi zvakaiswa uye zvagadzirira kutakurwa.
Mutengesi anogamuchira chigadzirwa asina kuverenga iyo RFID tag.Nguva nenguva, zvisinei, vashandi veRoyal Trading vachashanyira chitoro kuti vatore zvinyorwa zveSerafini zvigadzirwa vachishandisa ruoko rwakabata RFID kuverenga.
NeRFID system, nguva yechizvarwa chezvinyorwa zvekutakura zvigadzirwa inoderedzwa ne30%.Panyaya yekugamuchira zvinhu, kugadzirisa huwandu hwezvinhu, kambani ikozvino inoda mushandi mumwe chete kuti apedze basa revanhu vashanu;aimbove maminitsi 120 zvino anogona kupedzwa mumaminitsi matatu.
Iyo purojekiti yakatora makore maviri uye yakapinda muchikamu chekuyedza chakareba.Munguva ino, LTC nevagadziri vembatya vanoshanda pamwe chete kuti vaone huwandu hushoma hwemabhii ekushandisa, uye nzvimbo dzakanakisa dzekunyora.
LTC yakaisa mari inosvika zviuru makumi manomwe nezvina zvemadhora pachirongwa ichi, icho chinotarisirwa kubhadharwa mukati memakore matatu.Iyo kambani zvakare inoronga kuwedzera RFID tekinoroji pakutora uye mamwe maitiro mumakore anotevera 3-5.